HomeTORKIAFaritra Marmara54 SakaryaNational Railway Asa any TÜVASAŞ
National Railway Asa any TÜVASAŞ
13 / 01 / 2020 54 Sakarya, Railway, ANKAPOBENY, RAFITRA, Headline, Faritra Marmara, Tüvasas, TORKIA
fifandimbiasana fiaran-dalamby tuvasasta
Torkia Wagon Industry Inc. National Electric Train fanentanana natomboka. Hanafaingana ny asany ity orinasa ity ary miasa ny asabotsy izao ny mpiasa. Ny lamasinina nasionaly dia mikasa handeha eny an-dàlana teny amin'ny faran'ny volana jona na Jolay.
Torkia Wagon Industry toy ny (TÜVASAŞ), orinasa avy any ivelany izay tsy manana fahalalana amin'ny alalan'ny famokarana solika lamasinina andian-dahatsoratra eo ambanin'ny fahazoan-dalana, dia natao ho ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra-pirenena milentika fiaran-dalamby.
Ny famokarana andian-tsarintany an'ny herinaratra nasionaly 160 kilometatra isan'ora ao anatin'ny ambaratongan'ny famokarana ny prototype dia antenaina ho vita amin'ny faran'ity taona ity ary hikasa ny handroso ilay fiara mankany amin'ny lalamby.
Fantatra mialoha fa ho vita amin'ny faran'ny taona ity ny fanadinana sy ny fanamarinana amin'ity andiam-piarandalamby ity ary hanomboka ny famokarana serial.
Ankoatr'izay, ny andiam-piaramanidina herinaratra nasionaly dia novolavolaina ary ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony dia natomboka ny namboarina mifanaraka amin'ny 225 km / ora mba hampiasaina amin'ny fampianarana R&D.
Vita amin'ny herintaona ny asa famolavolana ny lozam-pirenena herinaratra nasionaly.
TÜBİTAK dia handrindra ny hetsika R&D ao amin'ilay tetikasa ary hamolavola singa manan-danja amin'ny haavon'ny prototype. Ny famokarana faobe ho an'ny herinaratra an'ny herinaratra nasionaly dia mikasa ny hanomboka amin'ny taona 2022 ary vita ny fampivondronana ny fiaran-dalamby haingam-pirenena amin'ny 2023.
Lamy herinaratra nasionaly dia hikapoka ireo arabe ireo taona 2020
Elektrikli Izahay dia mahita ny lalamby ho iray amin'ireo rohy mampivoatra amin'ny fampandrosoana maharitra, hoy i Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana tamin'ny datin'ny lamasinina nasionaly.
Mehmet Cahit Turhan hoy, tik dia efa niasa mafy izahay mba hamelomana indray ity faritra tsy niraharaha ity nandritra ny taona maro. Teo ambany fitarihan'ny Filohantsika, dia navadintsika tamin'ny politikam-panjakana ny lalantsika. Nohavaozina ny tamba-jotra rehetra rehetra ao amin'ilay tambajotra lalamby 11 km efa misy. Tao anatin'ny rafi-pandaminana ara-dalàna nataontsika, dia nanokatra ny lalamby ho an'ny sehatra tsy miankina izahay. Namboarinay ny fototry ny ara-dalàna ho an'ny fitaterana entana sy ny mpandeha amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny tamba-jotra lalamby. 590. Nanao halaviran'ny lalamby haingam-pandeha 1 kilometatra izahay.
Manodidina ny 52 tapitrisa ny dia natao tao amin'ny lalana Ankara-Eskişehir-Istanbul, lalana Ankara-Konya-Istanbul. Izahay izao dia mamoaka ampahany lehibe amin'ny fitaovam-piakarana haingam-pandeha ambony any amin'ny firenentsika. Namokatra ny sarety fitateram-pirenena izahay, ampiasainay. Amin'ny taona 2020 dia kendrenay ny mitondra mpandeha 9,8 tapitrisa miaraka YHT.
TCDD Transportation Co. 29,3 tapitrisa taonina, 5,5 tapitrisa taonina ireo mpandraharaha fiaran-dalamby tsy miankina, anisan'izany ny entana 34,8 tapitrisa taonina no lasibatra. I Marmaray dia mikendry ny hitondra mpandeha 2020 tapitrisa amin'ny 146.
Izahay dia manantena mpandeha 14,6 tapitrisa hoentina ao Başkentray. Ao amin'ny TÜVASAŞ, hampihenana ny Prototype National Electric Train Set amin'ny gara izahay amin'ny 2020 ary hanomboka ny famokarana faobe. ” (Medyab dia)
Sahur Shift ao amin'ny Apaydın Karaman-Ulukışla High Construction Line
Asphalt miasa ao amin'ny tanànan'i Kargı
Mpiasa Eoropeana ho an'ny toeram-pialan-tsambo any Erzurum
Asa mahery vaika 112 any Uludag
Nanomboka ny fanovana ara-tantara Marmaray Temenye Mound
Mampiato ny fihanahan'ny orampanala ny fiara cabin d'ordu
Zorlu Ramadan Mpiasan'ny mpitrandraka (Photo Gallery)
IZBAN Overtime avy amin'ny Ministera Yıldırım
Trolleybus Asa any Manisa Metropolitan
Mijanona tsy miasa ny Mechanic ary manakana ny lamasinina
Betsaka ny fiasan'ny Ben'ny tanànan'i Kocaoğlu
Ny asan'ny mpiasa amin'ny lalamby ao Elazığ
Night Shift amin'ny Konak Tram
Uludag Teleferikte Taombaovao amin'ny alina Mesaisi
Mitohy ny fiovan'ny asphalt ao Çorum
spindle electric locomotive
ny famokarana lamina herinaratra nasionaly
Vorontsiloza Wagon Industry
Ny fanadihadiana dia hatao amin'ny Sakarya Nostalgic Tram!
Mpiasa TCDD notazonina tao Ankara YHT nisedra fitsaram-bahoaka voatanisa ny tsy firaharahiana
Androany amin'ny tantara: 19 Janoary 1884 Mersin-Adana fananganana andalana
Fetiben'ny Ririnina Kartepe-Karfest Fanentanana, Fampirantiana ary hetsika Niandrasa anao